Jery taratra… herinandro : mangingina ratsy… tsy milamina | NewsMada
Jery taratra… herinandro : mangingina ratsy… tsy milamina
Par Taratra sur 30/07/2016
Tsy hita be ihany ny “Raharaha Soamahamanina“. Naato aloha? Tsy ny fitrandrahan’ny Sinoa volamena ihany, fa ny hetsika amin’izany. Andrasana izay ho tohiny, indrindra ny marina: takalon’ny lalana amin’ny Frankôfônia sa… ?
Mangingina ny amin’ny lalàna mifeny ny fifandraisana: hamerina ny fandinihana azy eny anivon’ny parlemanta ny filohan’ny Repoblika sa handefa izany eny anivon’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ihany (HCC)?
Paikadin’ny Vondrona eoropeanina eo amin’ny lafiny diplaomasia, araka ny fanazavan’ny mpirakidraharahan’ny delegasiona eto Madagasikara, ny filaminana sy fandriampahalemana, fahombiazan’ny fampandrosoana, ny demokrasia…
Miantso ny mpitondra amin’ny Dinika ho fanavotam-pirenena ny Afo sendikaly, ny Hetsika ho amin’ny fahalalahana maneho hevitra, ny Fiaraha-mientan’ny kristianina. Fifampidinihana hamahana ny olan’ny firenena ankehitriny izany.
Nankatoavin’ny filankevi-pitantanan’ny Tahirim-bola iraisam-pirenena (FMI) ny fifanarahana momba ny fampindram-bola ho an’i Madagasikara. Mahatratra 304,7 tapitrisa dolara izany vola izany, izay maharitra 40 volana ny handraisana azy.
Nilaza ny eo anivon’ny minisiteran’ny Tontolo iainana fa naato aloha ny fanondranana arina fandrehitra any ivelany, izay mahatratra 500 t isan-taona. Ny tsy fahampian’io angovo io eto an-toerana no antony, mampiaka-bidy azy koa.
Tsy mety mangina fa mirongatra hatrany kosa ny asan-dahalo an-tanàna sy ny fanafihan-jiolahy eny amin’ny lalàm-pirenena. Tsy hita izay tena afitsoky mpitondra amin’izany, ka miraviravy tanana ambony ihany ny vahoaka ifotony.
Raha mba mirongatra toy ny fanakanana sy fandravana hetsika lazaina ho manakorontana sy manongam-panjakana ny mpitandro filaminana amin’izany? Na natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany ny mpitandro filaminana, fa ny mpitondra…
Tsy hita izay tena hoe politika sy fandaharanasa ho asa mivaingana amin’ny fiainam-bahoaka: amin’ny tsy fandriampahalemana, fidangan’ny vidim-piainana… Mangingina ratsy ny mpitondra, nefa tsy afa-bela fa tompon’antoka amin’izao.